सूर्या लाईफको ११ करोड माथिको कारोवार, मुल्यमा माथिल्लो सर्किट, फ्लोरसिटले के देखायो ? – Insurance Khabar
सूर्या लाईफको ११ करोड माथिको कारोवार, मुल्यमा माथिल्लो सर्किट, फ्लोरसिटले के देखायो ?
प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७६, बिहीबार १९:०५
आज साताको अन्तिम दिन दोश्रो बजारमा बीमा कम्पनीहरुको चहलपहल धेरै थियो। अच्चमको कुरा २ अर्ब नजिक कारोवार भएको दिन सर्वाधिक कारोवार हुने ५ कम्पनी जीवन बीमा कम्पनी छन्।
बीमा कम्पनीहरु मध्य सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयर कारोवारले दोश्रो बजार दिन भरि नै ततायो। विहीबार सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक शेयर कारोवार भएको छ। कम्पनीको एकै दिनमा ११ करोड ३६ लाख बराबरको शेयर कारोवार भएको छ।
कारोवार रकम मात्र होइन आज कम्पनीको बजार मूल्यमा माथिल्लो सर्किट लागेको थियो। कम्पनीको बजार मूल्य प्रति कित्ता ४२ रुपैयाँले वृद्धि हुँदै ४६८ रुपैयाँ प्रति कित्तामा बजार मूल्य बन्द भएको छ।
कसले गर्यो आक्रामक खरिद ?
आज सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयर ४ नम्बर ब्रोकरबाट आक्रामक रुपमा खरिद भएको छ। आज ४ नम्बर ब्रोकरबाट सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सको ३ करोड ३८ लाख बराबरको शेयर खरिद भएको छ भने ४९ नम्बर ब्रोकरबाट ९१ लाख ०२ हजार बराबरको शेयर बिक्री भएको छ।
त्यस्तै दोश्रोमा ५८ नम्बर ब्रोकरबाट १ करोड ४० लाख बराबरको शेयर खरिद भएको छ भने ४५ नम्बर ब्रोकरबाट ७७ लाख ६९ हजार बराबरको शेयर बिक्री भएको छ। यसरी आजको फ्लोरसिट हेर्दा खरिद गर्ने ब्रोकर नै आक्रामक भएको देखिन्छ।